I-Country Life 20min ukusuka e-STHLM CITY - I-Airbnb
I-Country Life 20min ukusuka e-STHLM CITY
Sjödalen, Stockholms län, i-Sweden
I-indlu eyakhiwe ngamapulangwe ephelele ibungazwe ngu-Sebastian
U-100% wezivakashi zakamuva unikeze u-Sebastian izinkanyezi ezingu-5 ekuxhumaneni.
Imizuzu engu-20 ngemoto ukuya e-CITY, isitsha sethu sasehlobo esithokomele sisentabeni, ilanga likhanya usuku lonke futhi ukubuka kukude ngamamayela. Ukuhamba ngezinyawo ukuya e-Bus 833 kukuyisa e-Farsta Strand nge-15min exhuma kuzo zombili isitimela esihamba ngaphansi komhlaba kanye nesitimela esikuyisa eDolobheni cishe ngemizuzu eyi-15. Sicela uqaphele, uphathe ilineni lakho lombhede namathawula futhi uhlanze ngokuvumelana ne-Airbnb kanye nemiyalelo yethu ngaphambi kokuhamba. Siqasha masonto onke ngeSonto kuya ngeSonto. Siyakwamukela ngemfudumalo!
Lapha ungathola ukuthula futhi uthole umoya ngemva kosuku edolobheni. Akukho okumnandi, lapha imvelo nokuzola kusendaweni yokuqala. Uthatha amaminithi angu-10 wehla uye echibini ukuze ubhukude okungase kudingeke lapho ilanga ngokuvamile likhanya usuku lonke phezulu eziqongweni zezihlahla.
Indlu itholakala endaweni yethu enkulu ye-5000 sqm, ngakho-ke ungakwazi ukuhamba ngokukhululeka ngaphandle kokuphazanyiswa omakhelwane.
Isakhiwo esikhulu esingu-55kvm sinegumbi lokuhlala elinesitofu, Igumbi lokulala 1 elinombhede ongu-140cm kanye negumbi elincane lokulala elinombhede olingana izingane ezi-2. Indlu eyengeziwe engu-10kvm inemibhede engu-2pcs 90. Ngicela ubheke izithombe.
Indlu yethu inomlingiswa olula, kodwa inomlando othokozisayo. Ngaphambilini bekungekaLasse Kühler, umSwidi odumile kwezokudansa nezokuzijabulisa. Sizilungise kancane izingxenye zayo, kodwa okuningi kokuzwakala kwasekuqaleni nefenisha kusasele kuye. Uzothola okudinga kakhulu, isitofu, ihhavini, isiqandisi, amanzi amancane namanzi ashisayo ahambayo kanye neshawa encane.
Lena indawo yokuqasha, sizokuqondisa ngayo yonke imiyalelo edingekayo nge-imeyili. Udinga ukuba namashidi akho kanye nethawula, futhi uhlanze ngemva kokuhamba.
Hlola ezinye izinketho ezise- Sjödalen namaphethelo